Allylestrenol အမှုန့် (432-60-0) hplc≥98% Buy | AASraw
/ ထုတ်ကုန်များ / အမျိုးသမီးဟော်မုန်း / Allylestrenol အမှုန့် (432-60-0)
SKU: 432-60-0. အမျိုးအစား: အမျိုးသမီးဟော်မုန်း
AASraw CGMP စည်းမျဉ်းများနှင့် trackable အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကအောက်မှာ Allylestrenol မှုန့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်အမိန့် (432-60-0) မှဂရမ်ကနေပေါင်းစပ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှငျ့အတူရှိ၏။
Allylestrenol အမှုန့်အခြားသူများအကြားအမှတ်တံဆိပ်အမည်ဖြင့် Gestanin နှင့် Turin, ခြိမ်းခြောက်ခြင်းနှင့်မှုများထပ်တလဲလဲကိုယ်ဝန်ပျက်ကျပေးလျက်ရှိသည်နှင့်အချိန်မတန်မီအလုပ်သမားကာကွယ်တားဆီးဖို့အဓိကချို့ယွင်းဖို့ဖွဲ့စည်းပုံဆက်စပ်တဲ့ progestogen ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်သက်သေပြချို့ယွင်းသောချို့တဲ့၏ချွင်းချက်နှင့်အတူ, ထိုကဲ့သို့သောအသုံးပြုမှုမရှိတော့ပါအကြံပြုသည်။
Allylestrenol အမှုန့် အခြေခံဇာတ်ကောင်
အမည်: Allylestrenol အမှုန့်
ပွိုင့်အရည်ပျော်: 79.5-80 °
ဓာတုအမည်များ: Allylestrenol အမှုန့်
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်များ: အခြားသူတွေအကြား Gestanin နှင့် Turin, Allylestrenol အမှုန့်, Gestanin အမှုန့်, Turin အမှုန့်, 432-60-0
ညွှန်ကြားအဖြစ်နှုတ်ဖြင့် Allylestrenol အမှုန့် (CAS 432-60-0) ကိုယူပါကအတူသို့မဟုတ်အစားအစာမပါဘဲခေါ်ဆောင်သွားနိုင်ပါသည်။ သင်ဤဆေး GI စိတ်ဆိုးကာကွယ်တားဆီးဖို့အစားအသောက်နှင့်အတူနိုင်ပါတယ်။ ထုတ်ကုန်အထုပ်ပေါ်မှာရှိသမျှလမ်းညွန်ကိုလိုက်နာပါ။ သင်သတင်းအချက်အလက်မဆိုနှင့် ပတ်သက်. မရေမရာဖြစ်တယ်ဆိုရင်, သင့်ဆရာဝန်သို့မဟုတ်ဆေးဝါးနှင့်တိုင်ပင်ပါ။
သင့်ရဲ့အခွအေနေဆက်ရှိနေသေးသို့မဟုတ်ပိုဆိုးလာရင်ဒါမှမဟုတ်သင်အသစ်ကရောဂါလက္ခဏာတွေဖွံ့ဖြိုးလျှင်သင့်ဆရာဝန်ကိုပြောပြပါ။ သင်အလေးအနက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပြဿနာရှိစေခြင်းငှါထင်ရှိလျှင်, ချက်ချင်းဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကူအညီရယူပါ။
Allylestrenol အမှုန့်ကိုအကောင်းဆုံးကွာတိုက်ရိုက်အလင်းနှင့်အစိုဓာတ်ကိုကနေတဲ့အခန်းအပူချိန်မှာသိမ်းဆည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ မူးယစ်ဆေးထိခိုက်ပျက်စီးမှုမှကာကွယ်ရန်, သင်ရေချိုးခန်းသို့မဟုတ်ရေခဲသေတ္တာထဲမှာပလပ်စတစ် Allylestrenol အမှုန့်တွေကိုသိမ်းဆည်းမပေးသင့်ပါတယ်။ ကွဲပြားခြားနားသောသိုလှောင်မှုလိုအပ်ချက်ရှိစေခြင်းငှါ Allylestrenol အမှုန့်၏ကွဲပြားခြားနားသောအမှတ်တံဆိပ်ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာအမြဲသိုလှောင်မှုညွှန်ကြားချက်များအတွက်ထုတ်ကုန်အထုပ်စစ်ဆေး, သို့မဟုတ်သင့်ဆေးဝါးမေးရန်အရေးကြီးပါသည်။ ဘေးကင်းလုံခြုံမှု, သင်ကွယ်ပျောက်ကလေးများနှင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအနေဖြင့်အားလုံးဆေးဝါးစောင့်ရှောက်သင့်ပါတယ်။
အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ညွှန်ကြားမဟုတ်လျှင်သင်ကအိမ်သာကဆင်း Allylestrenol အမှုန့်ရှင်းလင်းရန်တစ်ခုသို့မဟုတ်ယိုစီးမှုသို့သူတို့ကိုငါသွန်းလောင်းမပေးသင့်ပါတယ်။ ဒါဟာကုန်ဆုံးသို့မဟုတ်မရှိတော့လိုအပ်သည့်အခါစနစ်တကျဒီထုတ်ကုန်ဖယ်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ လုံခြုံစွာသင့်ရဲ့ထုတ်ကုန်ဖယ်ဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းပိုမိုအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအဘို့သင့်ဆေးဝါးနှင့်တိုင်ပင်ပါ။
လူကြီးများအတွက် Allylestrenol အမှုန့် (Gestanin အမှုန့်) ၏ထိုးကဘာလဲ?
အရွယ်ရောက်ပြီးသူ:55-7 နေ့ရက်ကာလအဘို့နှုတ်တနေ့သုံးကြိမ် MG ။
ကလေးတစ်ဦးအဘို့အ Allylestrenol မှုန့်ဆေးထိုးကဘာလဲ?
အဆိုပါသောက်သုံးသောကလေးလူနာအတွက်ထူထောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ကလေးအတွက်အန္တရာယ်မကင်းပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာအပြည့်အဝအသုံးမပြုခင်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်အမြဲအရေးကြီးပါသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကအဘို့သင့်ဆရာဝန်သို့မဟုတ်ဆေးဝါးတွေနဲ့တိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်လို Allylestrenol အမှုန့်ရရှိနိုင်ပါသလဲ
ခံတွင်းတက်ဘလက်:5MG ။
သငျသညျ Allylestrenol အမှုန့်တစ်ထိုးလက်လွတ်လြှငျ, တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးကယူပါ။ သို့ရာတွင်ထိုသို့နီးပါးသင်၏နောက်ထိုးဘို့အချိန်ဖြစ်ပါသည်လျှင်, လွဲချော်ထိုး skip နဲ့စီစဉ်ထားအဖြစ်သင့်ပုံမှန်ထိုးယူပါ။ နှစ်ဆထိုးမယူပါနှင့်။
မင်္ဂလာပါကျန်းမာရေး Group မှဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကြံပေးခြင်း, ရောဂါသို့မဟုတ်ကုသမှုမပေးပါဘူး
ဘယ်လို Allylestrenol အမှုန့်အကျင့်ကိုကျင့်
Allylestrenol အမှုန့်အဓိကချို့ယွင်းဖို့ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် function ကိုအလားတူပါပဲ။ အဓိကချို့ယွင်းသည့် progestins ၏ pharmacological လုပ်ရပ်များဝေမျှပေးသည်။ အဓိကချို့ယွင်းသည့်ချို့ယွင်းသောနှင့် estrogen receptor မှချည်နှောင်။ ပစ်မှတ်ဆဲလ်အမျိုးသမီးမျိုးပွားကျေးရွာအုပ်စု, အ mammary gland, အ hypothalamus, နှင့် pituitary ပါဝင်သည်။ ပြီးတာနဲ့အဲဒီ receptor မှခညျြနှောငျချို့ယွင်းသောတူသော progestins အဆိုပါ hypothalamus ကနေဖြန့်ချိဟော်မုန်း (GnRH) gonadotropin ၏လွှတ်ပေးရန်၏ကြိမ်နှုန်းနှေးကွေးခြင်းနှင့် Pre-ovulatory LH (luteinizing ဟော်မုန်း) တုံးမြင့်တက်မည်ဖြစ်သည်။ လုံလောက်သော endogenous အီစထိုဂျင်သူအမျိုးသမီးတွေမှာတော့အဓိကချို့ယွင်းတဲ့အတွင်းသို့တဦးတည်းသို့တီထွင်ခဲ့တယ် endometrium အသွင်ပြောင်းလဲ။ ချို့ယွင်းသောရွက်ကြွေတစ်သျှူးများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်နှင့်တစ်ဦးသန္ဓေသား၏ implantation များအတွက် endometrial Reception တိုးမြှင့်ဖို့လိုအပ်ပေသည်။ တစ်ဦးသန္ဓေသားကိုထညျ့သှငျးခဲ့သပြီးတာနဲ့ချို့ယွင်းသောကိုယ်ဝန်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆောင်ရွက်သည်။ ချို့ယွင်းသောလည်း mammary alveolar တစ်ရှူးများ၏ကြီးထွားမှုကိုလှုံ့ဆော်ခြင်းနှင့်သားအိမ်ချောမွေ့ကြွက်သားပြေစေပြီး။ ဒါဟာနည်းနည်းအီစရိုဂျင်နှင့်အန်ဒရိုဂျင်လှုပ်ရှားမှုရှိပါတယ်။
pregnanediol နှင့် pregnanolone ၏ glucuronide နှင့် sulfate conjugation ဆီးနှင့်သည်းခြေအတွက်ပြန်ထွက်သွားသည်နေကြသည်။ အဆိုပါသည်းခြေအတွက်ပြန်ထွက်သွားသည်ထားတဲ့အဓိကချို့ယွင်း metabolites enterohepatic ပြန်လည်ခံယူစေခြင်းငှါဒါမှမဟုတ်မစင်ထဲမှာပြန်ထွက်သွားသည်နိုင်ပါသည်။ ချို့ယွင်းသော metabolites ကျောက်ကပ်အားဖြင့်အဓိကအားဖြင့်ပြန်ထွက်သွားသည်နေကြသည်။
Allylestrenol အမှုန့်မျိုးစုံကိုယ်ဝန်ပျက်ကျ, အရွယ်မတိုင်မီအလုပ်သမားသို့မဟုတ်ညင်သာပျော့ပျောင်းဆီးကျိတ် hyperplasia ခံစားခဲ့ရကြသူလူနာများကိုမှအုပ်ချုပ်ခွင့်ရနေသည်။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေး gonadotropin များလွှတ်ပေးရေးအတွက်တာဝန်ရှိသည်နှင့် Pre-ovulatory luteinizing ဟော်မုန်း၏တစ်ဟုန်ထိုးဆင်းနှေးကွေးသောဟော်မုန်းတွေနဲ့နှောင့်ယှက်။
သင်သည်သင်၏ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ခြင်းနှင့်ရှေ့တော်၌အောင်မြင်သောကိုယ်ဝန်တားဆီးကြအံ့သောငှါသင့်ရဲ့ကိုယ်ဝန်ပြည်နယ်နှင့်အခြားဆေးဘက်ဆိုင်ရာအခြေအနေများ၏စေ့စေ့စပ်စပ်ဆေးပညာဆိုင်ရာရောဂါရသင့်ပါတယ်။ သငျသညျမူးယစ်ဆေးသို့မဟုတ်အစားအစာမှမဆိုတည့်မှု, သင်ခဲ့မဆို Pre-တည်ဆဲမမှန်သို့မဟုတ်ရောဂါများသင့်ဆရာဝန်ကိုသတိထားမိအောင်ထားရမည်, သို့မဟုတ်သင်မည်သည့်ဟော်မုန်းဆေးပြား, အစားအသောက်ဖြည့်စွက်သို့မဟုတ်အခြားဆေးညွှန်းမူးယစ်ဆေးဝါးများအပေါ်လျှင်။
သင့်ဆရာဝန်ကညွှန်ကြားအဖြစ်သင်ဆီးချိုရောဂါ၏စိတ်ရှည်, ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်, ဝက်ရူးပြန်ရောဂါ, ပန်းနာရင်ကြပ်များမှာအထူးသဖြင့်လျှင်သတိထားအတူမူးယစ်ဆေးဝါးများ ယူ. ရမည်ဖြစ်သည်နှလုံး, ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာသို့မဟုတ်အသည်းရောဂါများရှိသည်, ဒါမှမဟုတ်သင်ဂလူးကို့စဆီသို့ဦးတည်သည်းမခံသောမှန်လျှင်။
အခြို့သောအခြမ်းအန်ခြင်းနှင့်ပျို့ချင်ပါဝင်သည်ရသောဆိုးကျိုးများ, မြဲခေါင်းကိုက်, ထိုကဲ့သို့သောအဖု, အသင်းအဖွဲ့ချုပ်, နီခြင်း, လည်ချောင်းရောင်ရမ်းခြင်း, လျှာ, နှုတ်ခမ်း, မှုန်ဝါးသောရူပါရုံကိုနှင့်မူးဝြေခင်း, အစာအိမ်ရောဂါနှင့်ဝမ်းဗိုက်နာကျင်မှု, ချုပ်သို့မဟုတ်ဝမ်းလျှော, အတက်အကျအဖြစ်အသားအရေဓာတ်မတည်ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါသည် သွေးပေါင်ချိန်၏။ သင်ဆေးပညာယူကြပြီညာဘက်ပြီးနောက်ကားမောင်းသို့မဟုတ်မကြာခဏအပြင်မှာသွားကိုရှောင်ကြဉ်ရပါမည်။
Allylestrenol အမှုန့် (CAS 432-60-0)
Allylestrenol အမှုန့်ကုသမှု, ထိန်းချုပ်မှု, ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး, & အောက်ပါရောဂါများ, အခြေအနေများနှင့်ရောဂါလက္ခဏာများ၏တိုးတက်မှုများအတွက်အသုံးပြုသည်:
-Benign ဆီးကျိတ် hyperplasia
Gestin ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ (Allylestrenol အမှုန့်) အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောသူတို့အားပါဝင်သည်။ ဤအအကျိုးသက်ရောက်မှုများမဆိုဆက်လက်ရှိ, ဒါမှမဟုတ်ပိုဆိုးလာလျှင်, သင်ချက်ချင်းသင့်ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
AASraw ထံမှ Allylestrenol အမှုန့်ကိုဝယ်ဖို့ကိုဘယ်လို